TRF ee saxaafadda 2016 | Wargeysyada Reward Foundation iyo online
Bogga ugu weyn TRF ee Saxaafadda 2016
Warbaahintu waxay soo saartay Hay'adda Abaalmarinta Reward waxayna ku faafineysaa ereyada ku saabsan shaqadayada oo ay ka mid tahay: fasallada feejignaanta loola jeedo; wacitaanka wax-ku-oolka jinsiga ku salaysan ee dhammaan dugsiyada; u baahan tahay tababbar loogu talagalay bixiyeyaasha daryeelka caafimaadka NHS ee ku saabsan daroogada foojignaanta iyo ka qayb qaadashada cilmi ku saabsan dhibaatooyinka galmada ee sababa galmada. Boggan wuxuu muujiyaa qaar ka mid ah guulaheena saxaafadda.
Wargeysyada iyo Online
Oktoobar 2016. Mary Sharpe waxay kujirtaa faallooyinkaan oo ay soo saartay Dr Linda Hatch oo ku saabsan galmada iyo balwadda galmada ee Boqortooyada Midowday.
The Sunday Times - Xulka Scotland, 21 Ogosto 2016
Nooca loo isticmaalo dibadda Scotland waxaa laga arki karaa internetka halkan. Waxay u baahan tahay rukun, in kastoo aad iska qori karto laba sheeko oo bilaash ah usbuucii. Waxaa sidoo kale loo adeegsaday sheekadan wararka luqada Croatian ee cinwaanka hoostiisa ah NAVUČENI NA PORNIĆE Djeca od 11 godina ovisna su o nasilnom seksu oo uu qoray Ana Muhar.
Jariidada Daily Mail ee Scottish-ka ayaa dabagal ku sameysay sheekada Times labo jeer. Marka hore waxay soo bandhigtay qaybta soo socota…
Maalintii xigtay waxay adeegsatay dhowr fikradood oo Abaalmarinta Abaalmarinta hoggaamiyaheeda…
Ardayda mid ka mid ah dugsiyada sare ee gaarka loo leeyahay ee caasimadda ayaa loo qoondeeyay inay qaataan fasalo "wacyi galin" oo ay ka cabsadaan cabsida cabsida.
Fettes College, oo tirinaysa ra'iisal wasaarihii hore Tony Blair oo ka mid ahaa ardayda ka qalinjabisay, ayaa ku martiqaadey khabiir internetka ah si uu ula kulmo ardayda dhammaadka sannadkan.
Waxay timaaddaa kaddib korodhka jirka ee cilmi-baaris dheer oo la xidhiidha si xun loola dhaqmo iyada oo ay sii xumaanayso caafimaadka maskaxda iyo awood darrada.
Waxaa sidoo kale jira sheegashooyin ah in khamriga uu waxyeelo u keeni karo daraasadaha, fursadaha shaqada iyo xiriirka, iyada oo digniino dheeraad ah ay ka dhigayaan in ay kor u qaadi karto daawashada sawirada sharci darada ah ee cunsuriyada caruurta.
Mary Sharpe, oo ah garyaqaan iyo aasaasihii ururka Reward Foundation, oo ah hay'ad samafal ah oo kor u qaadaysa xiriirka caafimaadka leh, ayaa durbadiiba waxa uu siiyay fasalo qarsoodi ah oo ku saabsan akhristaha George Heriot iyo Dollar Academy ee Stirling.
Ilaha u dhow mid ka mid ah dugsiyada ayaa sheegay in kulannadu ay ahaayeen kuwo "si daacad ah oo toos ah" oo ku saabsan saameynta nacaybka sigaarka, iyada oo ilo kale oo lagu tilmaamayo inay yihiin "xiiso iyo qiimo".
Habkani waxa uu caddeeyey faa'iido badan oo ah Fettes - kaas oo kharashka ku baxaya £ 32,200 sanad - waxay go'aansadeen in ay qaataan.
Sharpe ayaa sheegtay in lagu martiqaaday in ay fasalka siiso sanad dambe. "Dugsiyadani waxay dareensan yihiin waxyeellada waxyeelada leh ee saameynta xun ee maskaxdu ay ku yeelan karto ardaydooda, marka la eego caafimaadka maskaxda iyo waxbarashadooda," ayuu ku daray Sharpe.
Xarunteeda waxay soo bandhigtay faahfaahin ku saabsan kumanaan kiis oo dhalinyaro ah oo ka yimid Ingiriiska iyo dibaddaba, kuwaas oo ka hadlayay saameynta dhibaatada ka haysata mukhadaraadka.
Sharpe ayaa sidoo kale ka digay in loola jeedo in loola dhaqmo heerarka is-dul-qaadista ay sii korodho sii socoshada iyo in caado-kooda ay kor u kacdo, iyada oo isticmaalayaasha raadinaya walxo garaaf leh si ay u qanciyaan.
"Ragga dhalinyarada ah ayaa si dhakhso ah uga sii deyn kara sheekada jilicsan ee jilicsan, leexashada fetishka iyo caruur xun oo xun, si ay ugu qanciyaan baahidooda kufsigaas," ayay raacisay.
Cameron Wyllie, oo ah maamulaha George Heriot's, ayaa yiri: "Waa wax muhiim ah in dhalinyaradu ay soo wajahdo khatarta ay leedahay in la daawado sawir-maskaxeed iyada oo la adeegsanayo daraasado sayniska ah oo muujinaya in isticmaalka xad-dhaafka ah ee pornography uu yahay mid maskaxiyan iyo maskax ahaanba waxyeello leh.
"Caddeyntu waxay sii kordheysaa in si aan caqli-gal ahayn loogu muujiyo sawir-qaadidda ladagaalanka internetka, oo si sahlan loo galo casriga iyo kiniiniyada, waa ay hoos u dhigayaan raggii dhallinyarada ahaa oo ka tagay iyaga oo aan awoodin in ay ku kacaan lammaane galmo."
Bishii Juun, NHS Lothian ayaa ugu baaqday Sharpe in ay la kulanto shaqaalaheeda xarunteeda Caafimaadka Chalmers Street ee caafimaadka galmada si kor loogu qaado wacyi-galinta ladagaalanka saboolka ah.
Goobta Ingiriiska ee Huffington Post ayaa soo socota soo socda story markay ahayd 22 Ogosto 2016. waxaan iftiiminay faallo fiican oo ka timid akhristaha ku nool Mareykanka.
Independent ayaa dib u bilaabay, inta badan, sheekada Sunday Times, oo la heli karo halkan.
Sheekada waxaa sidoo kale laga soo qaaday warbaahinta caalamiga ah, sida ugu fog Vietnam iyo Indonesia.
Hay'ad samafal ah oo ay abuureen u dooduhu waxay daabacayaan waraaqo ku saabsan saameynta xun ee filimmada
Hay'ad samafal oo uu aasaasay u dooda ayaa daabacday warqad ku saabsan saameynta isticmaalka filimada qaawan ee internetka.
Mary Sharpe, xubin aan xirfad lahayn oo ka mid ah Kulliyadda Udoodayaasha, dhaqanka bidix si loo dhiso Abaalmarinta Abaalmarinta, hay'ad samafal ah oo ujeedadeedu tahay in lagu fahmo fahamka dadweynaha ee ku saabsan wareegga abaal-marinta ee maskaxda iyo sida ay ula macaamilayso deegaanka iyo sidoo kale si loo wanaajiyo caafimaadka iyada oo la sii wanaajinayo fahamka dadweynaha ee dhisidda adkeysiga cadaadiska.
Warqad cusub Badda Mareykanka dhaqaatiirta iyo Hay'adda Abaalmarinta Reward, oo cinwaankeedu yahay "Miyuu Pornography Internet ka keenayaa Dhibaatooyinka Galmada? Dib u Eegid la Warbixinta Caafimaadka", Waxaa lagu soo jeediyay hababka maskaxda ee adeegsiga suuqyada internetka ay abuuri karaan dhibaatooyin galmo xitaa dadka daawadayaasha caafimaadka leh. Kuwa bilaabaya isticmaalka xilliyada koritaanka muhiimka ah ee qaangaadhka iyo qaan-gaarka ah ayaa si gaar ah u nugul.
Qaar ka mid ah shariifka iyo hoggaamiyeyaasha qareennada ayaa si gaar ah u muujiyay cabsidooda ku aaddan saamaynta sawir-gacmeedyada ku saabsan dabeecada dhallinyarada Xeerka Sharciga ee Scottish-ka.
Ms Sharpe ayaa sheegtay in ay u maleeyneyso in kor u kaca dembiyada galmada ay "qayb ahaan u horseedi karaan kororka isticmaalka qaswadayaasha internetka".
Waxay intaas raacisay: "Shaki kuma jiro in xad-gudubka taariikheed ee carruurta iyo dad badan oo soo jeeda in ay soo sheegaan weerarka galmada ay qayb ka qaataan sida bilayska si fiican u ogaanayaan, laakiin hoosta ka xariiqa, walbaha galmada oo dhan iyo maskax ahaan maskaxda maskaxda ku hayso rabshado iyo mukhadaraad kale - Isbedelada maskaxda ee la xidhiidha waa in ay qayb ka ciyaaraan.
"Tani waa in lagu qaado guddiga cadaaladda dembiyada iyada oo lala kaashanayo hay'adaha waxbarashada iyo caafimaadka haddii aan aragno hoos u dhac ku yimaada aaggan dambiga."
Agoosto 22, 2016. Hagaajinta Dugsiyada
Garyaqaan Mary Sharpe ayaa cinwaanada cinwaanada ku dhufatay dhawaan ka dib markii ay soo baxday in Tony Blair dugsigiisii ​​hore uu bixin doono fasalo "ka wacyi galinta" ah iyada oo ay jirto cabsi laga qabo saameynta xun ee waxyaabaha anshax xumada leh ay ku yeelan karaan ardayda.
Kulliyadda Fettes ee ku taal Edinburgh, oo ah mid ka mid ah iskuulada dadweynaha ee ugu caansan UK, ayaa ku casuuntay Ms Sharpe, oo ah aasaasaha hay'adda samafalka ee Reward Foundation, inay halkaas kula hadasho ardayda bilowga sanadka soo socda.
Hadda qorshayaashan ayaa soo baxay si ay u soo bandhigaan fasallada noocan oo kale ah iskuday si looga dhigo in ardayda laga saaro fara-xuruufta iyaga oo ka digaya cawaaqibka ka iman kara cawimaadkooda.
Darryl Mead, seygeeda Ms Sharpe iyo gudoomiyaha Hay'ada Reward Foundation, oo kobcisa xiriir caafimaad qabta, waxay lahadleysay Belfast Telegraph, waxayna Belfast Telegraph u sheegtay in Northern Ireland ay kujirto ajandaha.
"Me iyo Mary waxaan si wada jir ah ugu soo bandhigi doonaa iskuulada waxaanan aad u xiiseyneynaa inaan tababaro ku qabano gobolka oo dhan," ayuu yiri Dr Mead.
“Wali maanaan helin machadyo gaar ah oo maskaxda ku haya, laakiin Waqooyiga Ireland waxay kujirtaa liistadayada waxayaabaha aan qabanayno waxaanan aad ufureynaa bixinta casharo iskuulada hoose, sare iyo naxwaha.
Waxaan sidoo kale ku faraxsanahay inaan siino kal-fadhiyo gaar ah wiilasha iyo gabdhaha maxaa yeelay waxay leeyihiin shuruudo kala duwan markay tahay barashada filimada.
Ms Sharpe ayaa u sheegtay Radio Ulster barnaamijkeeda Nolan Show shalay in kastoo ay hada ugu horeyn lashaqeeyaan 16 iyo 17 sano jir hadana ujeedkoodu yahay inay bilaabaan waxbarida caruurta sanadka ugu dambeeya ee dugsiga hoose.
"Cilmi baaris ayaa muujisay in da'da celceliska da'da carruurta ay bilaabaan inay raadiyaan sawirro qaawan oo kuwa la midka ah ay yihiin 10," ayay tiri.
"Maanta internetku wuxuu iyaga siiyaa wax kasta oo ku yaal jiirka ama farta oo la mariyo, markaa haddii aan dooneyno inaan ilaalino maskaxda carruurta marka ay ku jiraan kuwa ugu malleyn kara, waa inaan hadda ka dhignaa inay ka warqabaan."
Garyaqaanka wuxuu yiri in kasta oo "fiirinta qaawan iyo qaawanaanta aysan waxyeello geysan doonin", haddana waxaa jirtay halisteeda oo u noqotay irrid laga galo waxyaabo badan oo cad, oo waxyeelo u geysan kara.
"Maskaxdu way ku caajisaa wax ka dib markii ay aragtay dhowr jeer waxayna u baahan tahay wax cusub waana mid aad u fudud in loo sii gudbo jilicsanaanta jilicsanaanta iyo rabshadaha iyo carruurta oo ku kacda taas," ayay tiri. "Waxay ka baranayaan internetka waxyaabaha qaldan oo dhan oo iyaga ayay wax u dhimaysaa."
Niyadjabka iyo ADHD (feejignaanta maqnaashaha macquulnimada ee maqnaashaha) waxay ahaayeen laba ka mid ah dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda Ms Sharpe oo lala xiriirinayo fara-xumeynta.
Waxay sidoo kale tixraacday dhibaatada sii kordheysa ee cillad la'aanta kacsiga ee ragga 20-jirka ah "maxaa yeelay waxay fiirinayeen galmada da 'yarta".
"Waxay joojinayaan ku raaxeysiga lamaanahooda ama kacsiga galmada caadiga ah maxaa yeelay maskaxdooda waxaa loo isticmaalay kicinta kicinta internetka," ayay tiri.
"Halkii ay ka baran lahaayeen sida loo sheekeysto gabdhaha oo gacmaha la is qabsado oo loo sameeyo talaabooyinka jilicsan ee caadiga ah, waxaa loo soo bandhigayaa waxyaabo xad dhaaf ah."
DUP MLA Nelson McCausland ayaa soo dhaweysay talaabadan si fasalada loogu heli karo caruurta maxaliga ah, iyagoo sheegay inay “sax tahay in dhalinyarada laga wacyi galiyo qatarta sawirada”.
"Waxaa jira wacyigelin weyn maanta oo ku saabsan dabeecada halista ah ee walxahaas iyo habka ay u saameyso maskaxda aadanaha," ayuu yiri. Wax kasta oo ka caawiya dhalinyarada inay helaan nolol caafimaad leh oo ay ka digtoonaadaan khataraha noocaas ah waa wax fiican. ”